Waa maxay salaadda iyo ka fiirsashada - Afrikhepri Fondation
Dhexdhexaadinta iyo tukashada
Waa maxay salaada iyo ka-fiirsashada
Therajada lagu muujiyey salaadda, miyaanay jid u ahayn xagga Ilaah? Aan eegno arimaha kala duwan ee su'aashan. Waxay ku saabsan yihiin duco, xoojin iyo fikir.
Si kale marka loo eego, waxaan rabnaa jahawareerkayaga, dhibkeena, khilaafkeena, in la xakameeyo mid kale oo naga mid ah, waxaan u leexannaa qof si nagu keeno iftiin iyo farxad.
Xaqiiqadu waa inay kuu timaaddo, ma aadi kartid.
Weli waxaa jira arrin kale oo su'aashan ah, waa jawaabta waxa aynu ugu yeedhno codka gudaha ah.
Dhibaatadani waxaa sidoo kale jira xoojin. Inta badan ee naga mid ah, diirad-saariddu waa nidaam ka-saaris ah, kaas oo loo sameeyey si ay u shaqeeyaan dadaal, caqabada, jihada, qaybi.
Nidaamkani, waxaad u yeeraysaa fikradda.
Laakiin tani ma aha mid feker ah.
Fikradaha runta ah ma ahan kuwo ku saabsan ka-reebista ama diidmada fikradaha, ama ku saabsan dhisidda iska-caabbinta fikradaha aan loo baahnayn. Salaadda, ma aha wax ka badan diiradda, waa feker run ah.
Fikradda fikradda maaha fikrad, sababtoo ah way fududahay in diirada la saaro maaddo xiiso leh. Guud ahaan waxaa ka mid ah qorshaha dagaalka kaas oo askarihiisa u diri doona dukaanku dukaanku aad u xoogan.
Uma baahnid in aad aqbashid waxa aan sheegayo, laakiin haddii aad eegto salaadda iyo feejignaanta fekerka si taxadar leh, qoto dheer, waxaad arki doontaa in midkoodna uusan keenin fahamka, halka fekerka kaas oo ka kooban fahamka xorriyadda, xuriyadaha, isdhexgalka.
Kaliya marka dhammaan meheradani ay yareeyeen oo la fahmay, marka miyir-beelka oo dhan la duubo, marka aanay jirin boog hal mar ah, oo lagu daro xusuusta kaliya ee lagu xidho, in ay weligeed in la helo.
Markaas waxaad raaci kartaa, iyada oo aan xukun ama xaq, dhaqdhaqaaq kasta oo aad fikirka iyo dareenka kasta oo Kolkay kacaan, aad engendrerez isjacayl in uusan hugged qasbay, taas oo aan ku koryeelay regimented laakiin baad ka timid ma lahaan doono dhibaato, wax is burin ah.
Waxay u egtahay balli in ay noqoto mid degan oo nabad ah habeenkii marka uusan dabayl lahayn. Marka maskaxdu ay aamusnayd, waxa lama huraan ah ayaa soo baxaya.
Daweynta Mindfulness Vipassana Daawaynta: Dhaqanka Buddhist Mindfulness Practice
2 cusub laga bilaabo € 4,20
Iibso € 4,20
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay Oktoobar 24, 2020 9:16 am
Buuggii Masaarida Masaarihii Muslimiinta ama Qaadashada Dayax-gacmeedka
Ama Mazama, khabiir ku ah luqada, diimaha Afrikaanka iyo taariikhyahanka
Guul ma sugo. Shaqada - Napoleon Hill (Audio)